2019 #NABShow: $ 1 ဘီလီယံနှင့်မဲရေတွက်, SPROCKIT startup ၏နောက်ဆုံးက Round ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow: $ 1 ဘီလီယံနှင့်မဲရေတွက်, SPROCKIT startup ၏နောက်ဆုံးက Round ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်!
အဆိုပါ 2019 မှာ #NABShow: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှိနေခြင်းသူ SPROCKIT, မီဒီယာအတွက်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစျေးကွက်-သက်သေထွန်းသစ်ကုမ္ပဏီများအဆက်သွယ်နေသည်, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာသည်၎င်း၏တော်လှန်ရေးကုမ္ပဏီများမှစုပေါင်း SPROCKIT ပူးပေါင်းပြီးနောက် $ 1 သန်းအပါအဝင်ထက်ပို $ 500 ဘီလီယံထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ SPROCKIT အဆိုပါ 2019 မှာ SPROCKIT Hub အတွက် featured ပါလိမ့်မည်သည့် startup ကုမ္ပဏီများသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်ရေးထုတ်ဖော်ပြအဖြစ်ဤသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မှတ်တိုင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် NAB ပြရန်, Las Vegas မှာဧပြီလ 6-11 ကျင်းပခဲ့တယ်။
"ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမှာ SPROCKIT မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ NAB ပြရန် 2013 အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက် "မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဂိမ်းလေဲရဲ့နောက်မျိုးဆက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မီးမောင်းထိုးဖို့ဖြစ်တယ် ဟယ်ရီအမ်ဂလေဇာ, တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ SPROCKIT ကဆိုသည်။ "ထက်နည်းခြောက်နှစ်နှင့် 150 ကုမ္ပဏီများသည်ထက် ပို. နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေစုပေါင်း SoftBank, BDMI, နှင့် Google Ventures နဲ့တူဟဲဗီးဝိတ်ထံမှ SPROCKIT ပူးပေါင်းပြီးနောက် $ 1 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာအပါအဝင်ရန်ပုံငွေအတွက် $ 500 ဘီလီယံအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ, စံချိန်ပါပြီ။ ဒါဟာစုပေါင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏တန်ခိုးမှစစ်မှန်သောသေတမ်းစာဖြစ်၏။ "
ဤနှစ်တွင်အသစ်နှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်သူကို 35 SPROKIT ကုမ္ပဏီများ, သစ်အတွက်ပြပါလိမ့်မည်မည်ဖြစ်သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပိုက်လိုင်းသည် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများ၏မြောက်အမေရိကခန်းမမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအဖွဲ့ဟာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ် SPROCKIT Sync ကို စက်မှုလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်စုပေါင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်စေရန်နည်းပညာသစ်များနှင့်ပူးပေါင်းအခွင့်အလမ်းများဆွေးနွေးရန်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းရှိရာယခုနှစ်လျှောက်လုံးပုဂ္ဂလိကဖိုရမ်များတစ်စီးရီး, သောဖြစ်ရပ်များ, ။ Comcast, FOX ကွန်ယက်အုပ်စု, Google Hearst ရုပ်မြင်သံကြား, ပြည်သူ့မီဒီယာ Venture Group မှအပါအဝင် SPROCKIT ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့ဝင်များ, Samsung က NEXT ကို, TEGNA, Univision နှင့် Verizon တက်ရောက်အကြားဖြစ်လိမ့်မည်။
"Google က SPROCKIT ကုမ္ပဏီများမှစားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်ကြဉ်းသောဆန်းသစ်ချဉ်းကပ်တန်ဖိုးထား" sChrissy Towle, သတင်းနှင့်ဒေသခံမီဒီယာများ၏ဦးခေါင်းကူညီမည်။ "Mountain View အတွက် Google မှာ SPROCKIT Sync ကို SV အပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီအစည်းအဝေးမှာကျနော်တို့ကိုချက်ချင်းမီဒီယာနှင့်နည်းပညာကိုအာကာသအတွင်းကိုနှိပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်သောဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီများမှတွေ့ရှ။ "
ပါဝင်စတင်များ၏ကနဦးစာရင်းဖွစျစနေို ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရ။ ပါဝင်စတင်၏နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်ပါဝင်သည်:
Adoppler - မီဒီယာဝယ်လက်နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အစီအစဉ် channel များကိုတည်ထောင်ရန်ရောင်းသူများအတွက်ပလက်ဖောင်း။
Advocado - အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ CRMs နှင့်သရုပ်ခွဲ tools များပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးသည်။
Burbio - Aggregators ဒေသကျောင်း, အစိုးရ, စာကြည့်တိုက်, အားကစားနှင့်လူထုအခြေပြုအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များ။
ဖိုလီယိုဖိုတွန်, Inc - တစ်ဦး 100 နှစ် Archive သက်တမ်းနှင့်အတူမျိုးဆက်သစ် optical ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူတန်ဖိုးနည်း Archive ဒေတာသိုလှောင်မှုကမ်းလှမ်း။
Jump, ဒေတာများ-Driven ဗီဒီယို - ပရိသတ်ကိုနှင့်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်ကစားသမားများအတွက်အကြောင်းအရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး Big Data နှင့် Artificial Intelligence နည်းပညာကိုသုံးသည်။
LocalBTV - OTA ကြည့်ရှုဖုန်းလက်ပ်တော့ & မတ်တီဗီ apps များနှင့်အတူဒေသခံတီဗီဘူတာစောင့်ကြည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Plum သုတေသန - ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်သုတေသနပြားကိုဖန်တီးရန်ဟာ့ဒ်ဝဲ, ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ ISP data တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် OTT ပရိသတ်ကိုတိုင်းတာခြင်းပေး။
switcher, Inc - တည်းဖြတ်အိုင်ဖုန်းကနေတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းနိုင်စွမ်းနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးသည်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးကူညီပေးသည်။
Sympli - ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်များအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံပူးပေါင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ဒီဇိုင်နာများ, developer များနှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေချိတ်ဆက်မည်။
အဆိုပါမေး - တိုက်ရိုက်ဂိမ်းကွန်ယက် - ကြေညာသူ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သတ္တိများသို့ embedded နိုင်နောက်ထပ်ချန်နယ်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံများကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တစ်ပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်း။
Vionlabs - ဖောက်သည်ဦးစားပေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်း AI အ-powered ထုတ်ကုန်ပေးနှင့် End-user လိုက်. အကြောင်းအရာအကြံပြုသည်။
Widespider - တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အစိတ်ကြိုက်သတင်းနှင့်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန် AI အနည်းပညာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် leverages ။
မှာစတင်နှင့် SPROCKIT လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ NAB ပြရန် ဒီမှာ.
SPROCKIT curates တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်သည်ချိတ်ဆက်နှင့်စျေးကွက်မှဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝင်ငွေမော်ဒယ်များရောက်စေဖို့ဦးဆောင်မီဒီယာနှင့် mobility ကုမ္ပဏီများနှင့်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစျေးကွက်-သက်သေပြချက်စတင်အကြားပူးပေါင်းအထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါသည်။ 2013 အတွက်၎င်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းကထက်ပို 150 ထွန်းသစ်ကုမ္ပဏီများအထက်ပိုမို $ 1 ဘီလီယံအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာပြုစုပျိုးထောင်နှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများကြုံနေရ, SPROCKIT ပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.sprockitglory.com.
NAB ပြရန်, ကျင်းပဧပြီလ6- Las Vegas မှာ, NV, USA တွင် 11, 2019, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာ၏ဆုံလွှမ်းခြုံကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်စုံဆုံးစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ 100,000 နိုင်ငံများနှင့် 165 + ပြသခဲ့သည်ထံမှနီးပါး 1,700 တက်ရောက်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် ရိုးရာအသံလွှင့်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇာတ်လမ်းပြောပြစီးပွားရေးကိုလောင်စာကြောင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက်အဆုံးစွန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း မှစ. စားသုံးမှုရန်, မျိုးစုံပလက်ဖောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးများကိုဖြတ်ပြီး, NAB ပြရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြော်အမြင်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ဘဝမှအကြောင်းအရာများကိုရောက်စေဖို့ကျင်းပရမည်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတ်ခရီးစဉ် www.nabshow.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-04-03
ယခင်: NUGEN အသံ 2019 NAB မှ Netflix-ကိုက်ညီ Solutions များရရှိစေ
နောက်တစ်ခု: 2019 NAB ပြရန်အဘို့အသက်တမ်းတိုး Vision ၏အပ်ဒိတ်များဟာ FlagShip တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Software များ